China 30w fast charge portable Power Adapter ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy iphone |Wellink
Mini 30w roa seranana haingana, PD3.0, QC3.0 charger.Fenoy haingana ny iPad ao anatin'ny 3 ora.Manohana famandrihana haingana ny fitaovana roa miaraka.30w ny herin'ny herinaratra avo lenta, feno ao anatin'ny antsasak'adiny.Aforitra, mora entina.IC marani-tsaina naorina, amboary ny ankehitriny, ny voltora ary ny fiarovana ny bateria.
1.Type-C Output: PD3.0 30w 5V/3A, 9V/2.25A, 12V/2.5A, 5V/2A, 20V/1.5A MAX
2. USB Output: QC 3.0 18w 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A Max
3.Type-C+USB Output total: 15w+15w Max
PC kilasy fanoherana afo 94V0 akorandriaka & aluminium firaka akora (1 amin'ny 2)
• Fiampangana haingana be: Miaraka amin'ny teknolojian'ny fanaterana herinaratra USB-C, ny charger USB C dia manome hery avo in-6 ary manefa telefaona Samsung amin'ny hafainganam-pandeha feno, in-3 haingana kokoa noho ny charger 5W mahazatra.
• Charger PD kely indrindra eran-tany: 50% kely kokoa noho ny ankamaroan'ny charger 30W, Magcube dia 0,09lbs monja ny lanjany, tena matevina ka azonao atao mora foana ao anaty paosy na kitapo ampiasainao isan'andro.
• Powered by GaN+ Tech: Misaotra amin'ny teknolojia GaN+ farany, ity adaptatera herinaratra 30w usb-c ity dia tsy kely kokoa amin'ny habeny, fa mahomby kokoa amin'ny fampitana herinaratra sy ny fanaparitahana angovo.
• Fiarovana eritreritra: Nampiasa ny Apple-chipset mitovy amin'ny Power Integration sy ny famoronana 3-dingana intelligent charging teknolojia, ny rindrina charger dia miantoka fiarovana avo lenta ary manome 3 hafa fiampangana ankehitriny ho an'ny sata samihafa.
• Fifanarahana midadasika: Mifanaraka amin'ny protocole famandrihana haingana maro, ny adaptatera herinaratra dia manome ny voltase sy hery mety amin'ny fitaovana nomerika samihafa, sakana famandrihana mety ho an'ny iOS, finday Android, takelaka, solosaina finday, ary koa smartwatches sy earbuds.
• Charger iray ho an'ny rehetra.
• Ny charger USB C dia afaka mifanandrify amin'ireo fitaovana ary manome ny herin'ny fiampangana haingana mifanaraka amin'izany amin'ny fitaovana samihafa, anisan'izany ny iPhone, iPad (miaraka amin'ny USB C - cable tselatra), Macbook, fitaovana Android, Switch....
• Tohano ny protocole fiampangana haingana PD2.0, PD3.0, QC2.0, QC3.0, QC4.0, PPS, Apple2.4, BC1.2 sy ny maro hafa, sakana iray tonga lafatra hamenoana haingana ny fitaovanao rehetra.
• Nampiasa ny GaN+ famandrihana haingana, ny USB C charger dia manohana ny famandrihana herinaratra amin'ny habe kely nohatsaraina.
• Ampidiro haingana ny findainao iPhone/ Samsung.
• Omeo 25W haingana ny fiampangana haingana ho an'ny Samsung smart phone ary hatramin'ny 20W fast charge ho an'ny iPhone (miaraka amin'ny USB C - tariby tselatra).
• Fiarovana marobe.
• Fiarovana amin'izao fotoana izao, Fiarovana amin'ny Voltage, Fiarovana amin'ny Circuit Short, Fiarovana amin'ny Temperature, Fiarovana amin'ny Taratra, Fiarovana amin'ny Fisondrotana, Fiarovana ny fitsabahana, Fiarovana amin'ny afo.
• Habe mitsitsy toerana.
• Mitovy habe amin'ny charger 5W tany am-boalohany nefa manohana hery in-6 avo indrindra.
• Tohano ny fomba mitete amin'izao fotoana izao mba hamenoana ny sofinao tsy misy tariby, smartwatch.
• Azafady, Mariho: Mba hahazoana fiampangana haingana, ankoatra ny fampiasana an'ity charger haingana ity, dia mila telefaonina fiampangana ianao, finday izay manohana protocole famandrihana haingana.
Mifanaraka amin'ny finday Android sy iOS rehetra.
Fanontaniana:Ny sarin'ny vokatra dia toa manondro fa misy tariby roa izy io, saingy toa misy plug ho an'ny iray ihany.Iza no marina?
Valiny:Cable iray.Tena manoro hevitra aho, mbola tsy nanana zavatra haingana be aho.
Fanontaniana:Hanova Samsung S21 ultra ve ity mpanova ity.
teo aloha: mini DP ho VGA mpanova
Manaraka: USB Type-C mankany HDMI Adapter
Usb C mankany Usb Adapter Hub
Usb Hub miaraka amin'ny Adapter Audio